XOG: MD Farmaajo oo sii dheereystay socdaalkiisa dalka Qatar & Qorshe loo degay Madaxda M/Goboleedyada. | Allbanaadir News	XOG: MD Farmaajo oo sii dheereystay socdaalkiisa dalka Qatar & Qorshe loo degay Madaxda M/Goboleedyada.
XOG: MD Farmaajo oo sii dheereystay socdaalkiisa dalka Qatar & Qorshe loo degay Madaxda M/Goboleedyada.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Qatar ayaa sii dheereystay socdaalkiisa oo markii hore la sheegay inuu qaadanayo 2 maalmood.
Arrintan ayaa xogta la helay sheegeysaa in ujeedka madaxweynaha ay tahay inuu ka baaqsado shirka amniga ee madaxda maamul Goboleedyada iyo dowladda Federaalka ku yeelan lahaayeen magaalada Baydhaba.